#Ozil oo Qimaha Gunadda uu Qaadanayo Awgeed oo la waaye koox qaadata xilli ay Arsenal Qiimo Jaban Ku raadineyso | Get Latest News From Horn of Africa |
#Ozil oo Qimaha Gunadda uu Qaadanayo Awgeed oo la waaye koox qaadata xilli ay Arsenal Qiimo Jaban Ku raadineyso
Arsenal ayaa isku dayday inay iska iibiso Mesuto Ozil intii lagu guda jiray suuqii Janaayo ee dhawaan xirmay – laakiin waxaa la waayay koox wayn oo ka dhisan Yurub oo dooneysa kubbad qaabeeyaha reer Germany.
Iyadoo ay jirto in Gunners ay dooneysay inay beec jaban isaga iibiso Ozil ayay misane kooxaha ka wada gaabsadeen sababo la xiriira Mushaarka qaaliga ah uu usbuuciiba jeebka ku shubto.
Laacibkii hore ee Real Madrid ayaa loo bandhigay Juventus balse camaaliqada reer Talyaani ayaa dhinac iska dhigtay sababo la xiriira lacagaha uu mushaar ahaanta u doonayo Usbuuciiba 350,000 oo bound.
Sida uu warinayo warsidaha reer Tlayaani Calciomercato, in Bishii November ay Marwada Duqda ah ka biyo diiday inu bixiso mushaar intaa la eg.
Taa badelkeeda Juve ayaa xalay ka dhawaajisay inay si rasmi ah ula soo wareegtay Aaron Ramey oo ku soo biiri doona marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan kaa oo qudhiisa qaadan doona mushaar aan sahalaneyn.
Wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in Inter Milan qudheeda ay diiday inay la wareegto Ozil sababo mushaarkiisa ah.
Ozil ayaa xanuun ku seegay ciyaartii dhaweyd ay Arsenal ka adkaatay Huddersfield waana markii 7-aad uu Xanuun ku seegayo kulan ciyaareed tan iyo bilowgii 2017.
30-jirka ayaa tababarka la qaatay kooxdiisa Gunners Jimcihii iyadoo ay kooxdu muuqaalkiisa soo dhigtay Youtube.
Balse tababare Emery ayaa doortay inuusan shaxdiisa ku soo darin.
Arsenal ayaa iminka ku jirta kaalinta 5-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League kaddib guushii 2-1 ay ka soo gaareen Huddersfield iyagoona farqiga goolasha uga sara maray Chelsea kaddib xasuuqii ba’naa ay u geysatay Man City 6-0.